Sokubala izilinganisi 1
Netoti ye valve, mm
Ubude kweentonga, iimitha
South Calculator 2
Ubunzima ewonke kugunyaziso, kg
Ixabiso hydrochloride nganye
Bala ubunzima iyonke izivalo, ubungakanani ogcweleyo, ubunzima wemitha enye enye intonga unyanzeliso.
Ukususela kwedayamitha eyaziwa nobude unyanzeliso.
sokubala izilinganisi 2
Bala ubude elipheleleyo nokugxininisa, imihlaba kunye nenani nemivalo nokugxininisa kwayo, ubunzima wemitha enye wayingcongolo enye.
Ukususela kwedayamitha eyaziwa ubunzima iyonke ye valve.
Ekubaleni isekelwe ubunzima enye cubic meter zentsimbi 7850 kg.
Ukubalwa South ukwakhiwa indlu
Ngexesha ukwakhiwa indlu kubaluleke kakhulu ukubala ngokuchanekileyo isixa inforcement isiseko. Ukwenza oku kuya kukunceda inkqubo yethu. Usebenzisa lwezivalo sokubala kunokuba, esazi ubunzima kunye nobude ngentonga ukwazi ubunzima iyonke ufuna nokugxininisa, okanye inani elifunekayo iintonga nobude yabo yonke. Ezi nkcukacha ziya kunceda ngokukhawuleza nangokulula makambalele inani kugunyaziso efunekayo ukwenza umsebenzi wakho.
Ukubalwa lwezilinganisi iintlobo ezahlukeneyo iziseko
Ukubala ubethelele funeka wazi uhlobo indlu ongaphantsi. Apha, kukho lunee ezimbini ezixhaphakileyo. Le esizi umhlube iziseko.
NeZilinganisi ukuze isiseko esizi
isiseko esizi isetyenziswa efunekayo apho kwimihlaba Inkitha ukufakela i ikhonkrithi enzima okanye indlu ngezitena kunye kwamatye amakhulu ubunzima eziphathekayo. Kule meko isiseko ifuna unyanzeliso. Yenziwe kwi imimandla ezimbini, nganye nezibabandakanya iileya ezimbini iintonga aa omnye komnye.
Cinga ngemeko ukubalwa inforcement kwamatye, ubude inxalenye leyo iimitha ezi-5. iintonga Ukomeleza zibekwe kumgama 20 cm omnye komnye. Ngenxa yoko, ngenxa icala umntu kufuneka imivalo 25. Emiphethweni seebar ipleyiti hayi zibekwe, ngoko, 23.
Ke kaloku, esazi inani kweentonga, ubude yabo kubalwa. Kufuneka kuqatshelwe ukuba izivalo iintonga akufuneki ukufikelela elintlangothi-20 cm, yaye, ke ngoko, ngokusekelwe ubude nembasa, ubude intonga nganye iya kuba 460 cm. umaleko ezinqamlezayo, ukuba nembasa inemilo square uya kuba njalo. Kwakhona siya kuba ukubala inani lwezilinganisi ezifunekayo ukuqhagamshela zombini imimandla.
Sicinge ukuba umgama phakathi namabhanti 23 cm. Kulo mzekelo, omnye jumper phakathi kwabo kuya kuba ubude-25 cm, kuba iisentimitha ezimbini ukushiya entabeni izixhobo. Ezo Imisonto kule meko 23 ngenani, kuba abenziwe kwiseli ekudibaneni kwe nganye namabhanti unyanzeliso. Ngala data, sinako adlulele yokubala ngokusebenzisa le nkqubo.
NeZilinganisi ukuze ngumcu isiseko
isiseko imicu isetyenziswa apho emhlabeni abuzinzanga kakhulu uthatha nkqo Indlu nzima. Yinto isiseko se tape senziwe ngesamente ngesamente okanye lwesamente elisingise kujikelezo sakhiwo phantsi iindonga eziphambili umthwalo-othwala. Ukomeleza isiseko kananjalo ziveliswa olukwiizowuni 2, kodwa Bulelani ozifumene kugunyaziso zephetshana isiseko kuyo umbane ongaphantsi kakhulu kwaye, ngenxa yoko, oko kuyingozi ngaphantsi.
Imithetho unyanzeliso ubeko malunga ngokufanayo isiseko esizi. iintonga Kuphela kufuneka kuphela ngo 30-40 cm kwikona. Kwaye jumper ngamnye kufanele 2-4 cm ukuze kuphunyezwe intonga apho ubuxoki. Ukubalwa nazar nkqo lwenziwa kumgaqo efanayo ekubaleni ubude inforcement ezifunekayo iziseko esizi.
Qaphela ukuba zombini ezi meko yokuqala neyesibini izivalo kufuneka sithatyathwe lunganako ubuncinane 2-5 ekhulwini ngalinye.